Indlela yokulahlekelwa ngamapounds angaphezulu ngaphandle kokulimaza umzimba.
Indlela ephumelelayo yokuthetha i-penbye kunye neepounds ezongezelelweyo yinto yokutya yemifuno.
Ngaba kuya kunciphisa ubunzima, kodwa awazi ukuba yeyiphi ukutya okukhethayo? Indlela enhle yokulahla iipounds eziziininzi ingaba kukutya kwemifuno. Ukhetho lwakhe alugcini nje ngokuba umzimba unqatshelwe amaqatha amanqatha, kodwa kwaye ayinalutho kumzimba. Ngokutsho koogqirha, le ndlela yokulahlekelwa isisindo ithathwa njengentando yesininzi, ekubeni kunye nemifuno eninzi iivithamini kunye nezinye izondlo zingena emzimbeni. Abanye bakholelwa ukuba le ndlela yokutya ingaba yindlela yokukhusela isifo senhliziyo.
Sisiphi isiseko sokutya?
Enyanisweni, yonke into iyilula: usuku kufuneka udle iikhilogram yeefuno kwimiba nayiphi na.
Ukwenza ukutya okuninzi kuninzi, kwangexesha elide ungeze inyama enamafutha aphantsi, amaqanda okanye i-oat flakes kwimenyu
Unokutya iimveliso zobisi ezincinci: i-yoghurt, ukhilimu omuncu okanye i-yogurt
Kufuneka nje uxwayise umthandi "wokukhawuleza" ukulahlekelwa kwesisindo: ukulahlekelwa iipounds ezimbalwa ngexesha elifutshane kakhulu aliyi kusebenza. Kungcono ukugcina ukutya okunjalo kwiiveki ezimbini okanye ngenyanga.
Njengokuba naluphi na ukutya, kukho uluhlu lokutya onokutya. Kule meko, kuya kubandakanya:
zonke ngaphandle ngaphandle, imifuno, kubandakanywa nezitata. Kuzo, unokwenza isobho, i-saladi kunye ne-stews. Kwaye ukuba ufuna ngokwenene, unokubhaka iinqutyana ezimbalwa kwi-oven
Qiniseka ukuba udla imifuno entsha: iparsley, idill, basil
ukusela ukulungele ukusebenzisa amanzi amaminerali ngaphandle kwegesi, itiye eluhlaza ngaphandle kweshukela okanye i-yogurt engenamafutha kunye ne-yogurt
Kuvumelekile ukuba badle ukudla kweprotheni: inyama yenkomo, i inkukhu kunye namaqanda.
Kukho ukulinganiselwa, nangona yonke into ilula apha. Ngelo xesha, nikela inyama enamafutha, ukutya okutshaya kunye nezinto ezibhaka. Xa ukupheka isobho ungasebenzisi umhluzi wenyama, kwaye i-saladi igcwalise ukhilimu omuncu okanye i-oyile yemifuno. Kubalulekile kwaye unciphise ngokuthe tye ukusebenzisa ityuwa. Ukuba awunanto yokutya ngaphandle kwayo, faka i-soy sauce.
Siza kukuxelela iindlela zokupheka ezimbalwa ongazisebenzisayo ukwenza iindidi ekudleni. Ukutya okunomsoco akuthethi ukuba uya kuhambelana ngqo nomyalelo wokutya izitya ezithile. Ngoko ke, unokutshintsha umyalelo wabo ngokwemiqweno yakho kunye namathuba akho. Kodwa kufuneka nje ukhumbule ukuba ukutya kufuneka kube mncinci kwaye uhlawule igalelo kwiindawo ezinhlanu.
Nazi ezinye iindlela zokupheka apho ungakwazi ukuzibeka ngokukhululekileyo imenyu yakho yiveki.
Isaladi kuyo nayiphi na imifuno ene-cottage cheese. Ixesha kunye nejisi lemon okanye i-oyile yemifuno
Iqanda elibilisiweyo kunye nemifino
I-oat flakes kunye neekroti ezigayiweyo, ezizaliswe ngegourt ephantsi
Unako ukusela ikhofi nobisi ngaphandle kweshukela okanye itiye eluhlaza
Isidlo sasekuseni sesibini sisetyenziswe njengesidlo esilula ngaphambi kokutya. Ukuba unokwenza ngokukhuselekileyo ngaphandle kwalo, ke uphuze amanzi ngaphandle kwegesi. Kodwa xa uvakalelwa yindlala, usenokutya enye itamatato, ipilisi okanye ikhukhamba. Iikaroti ezifanelekileyo kwaye ezigayiweyo.
Ekubeni esi sisidlo esikhulu, kufuneka siphathwe ngqalelo ekhethekileyo.
Isaladi yamakhukhamba, utamatisi kunye anyanisi kunye ne-ukhilimu omuncu kunye namazambane ezimbini abilisiwe
Lungisa i-vinaigrette uze ungeze igrama ezili-gram eentlanzi. Unako ukusela itiye eluhlaza
Iklabishi echitshiweyo ngeqhekeza lenkukhu ebilisiwe
Isobho semifuno ngaphandle komhluzi. Ngesibini yepatato enye ebhakiweyo kunye neepestile eziluhlaza
Ungasebenzisa isonka se-rye kunye nesinkwa, kodwa enye yodwa
Ukufumana i-snack, unako ukusela iglasi yegour kwaye udle ipropper eyodwa. Ukuba ufuna ngokwenene, jonga ithanga eliphekiweyo nge-spoonful honey.
Ukholifula othosiweyo kwi-batter
I-Asparagus ne-broccoli egqobile ngeoli yeoli
Ukuhluthwa kwe-zucchini kunye ne-eggplant
Kubonakala ngathi yonke into ilula, kodwa ngokubhekiselele ekuhlaziyweni kwabantu, indlela yokulahlekelwa isisindo ithathwa njengeyona ndlela isebenzayo kwaye iphephile kumzimba. Kodwa musa ukulibala malunga nomsebenzi wokwenyama. Kule ndlela kuphela unokugcina ixesha elide.
Ukutya: yonke into malunga nokutya kunye nokutya
Unokuthintela ukuthinteka njani ukushisa xa udlala imidlalo
Yintoni yokutya okubanzi?
Iqela lomntwana omtsha loNyaka omtsha
I-Caries iyisifo esiyingozi sezinyo
Intsapho efanelekileyo, kwaye ngokukhawuleza uhlaselo lomyeni
Akunakukwazi ukuthatha ubunzima ngexesha lokukhulelwa